Dortmund oo sheegtay qiimaha ay ku iibineyso weeraryahankeeda Aubameyang
Thursday, September 20th, 2018 - 16:32:46
Friday February 10, 2017 - 00:27:27 in Wararka by Kubad Bile
Kooxda Borussia Dortmund ayaa sheegtay in Weeraryhankeeda Pierre-Emerick Aubameyang ay Real Madrid kaga iibin doonto qiima dhan €70m, haddii ay doonayaan in badal kaga dhigtaan laacibka reer France Karim Benzema sida ay warineyso shabakada Goal.
27 Jirkan ayaa si cad u qirtay inuu daneynayo in la iibiyo, taasi lama micno ah inuu marka suuqakala iibsiga uu dib u furmo xagaaga uu iska tagayo.
" Haddii aan doonayo inaan horey uscod sameeyo, xagaagan ayaa tagayaa ," ayuu Aubameyang bishii hore u sheegay RMC, waxaana saamaynta warkan laga dareema Dortimund dhexdeda yaa laga daremay waxaa sidaa waxaa yiri maareeyaha Dirtimund Michael Zorc, waxayna kooxda ka dalbatay inuu wararkaas iska dhaafo isla markaana uu diirad sarto Tartanka horyaalda Yurub oo ay kooxda rajo weyn ka leedahay.
" Majiro cadaadis nagu kalifaya inaan Aubameyang," Agaasime Hans-Joaquim Watzke ayaa u sheegay jariirada Kicker. " waxuuna kooxda Kula jiraa heshiis dheer oo gaaraya 2020 , hadii uu go'aansado waanu qiimeyn doona ,basle raqiis kuma tagi doono.
Waloow wararka ku dhaw Real aan laga maqal baahi ay uqbaaan xiddiga heerka caalami ee dalka Gabon, waxaase Real ku riixi kara bandhiga liita ee Karim Benzema in ay dalab u diraan.
Laacibka rer France ayaa qandaraaskiisa waxuu dhacayaa 2019 ka hor hal sano heshiiska Aubameyang ee Dortimund.